Halatra ao amin’ny orinasa Ambatovy: amidy amin’ny mpanao vilany ao Ambatolampy ny nikela… | NewsMada
Halatra ao amin’ny orinasa Ambatovy: amidy amin’ny mpanao vilany ao Ambatolampy ny nikela…
Par Taratra sur 20/11/2021
Efa-dahy no voarohirohy nangalatra nikela sy kobalta tao amin’ny ozinina Ambatovy Toamasina. Voalaza fa vidian’ireo mpanao vilany mangilatra any Ambatolampy ny nikela ary aondrana any ivelany miainga any Morondava ny kobalta.
Nateti-pitranga ny halatra ao amin’ny orinasa Ambatovy eny Tanan­dava tato ho ato.
Araka ny loharanom-baovao, manodidina ny 1.500 kilao isan-kerinandro ny nikela sy kobalta very ao amin’ny ozinina. Voalaza fa misy olona mividy ny kobalta any Anta­nanarivo, atao anaty fonosana anaty kaontenera ary alefa any Toliara na Morondava efa feno kobalta ihany koa, haondrana any ivelany. Amidy any Am­ba­tolampy kosa ny nikela amin’ ireo mpanao vilany mangilatra be ireny.
Niakatra fampanoavana ny 15 novambra teo ny efa-dahy, voarohirohy nangalatra kobalta milanja 10 kilao. Voalaza fa nivoaka ny vavahady fivoahan’ ny mpiasa, izay misy mpiambina sivily misava ny rehetra izy ireo tamin’izany. Araka ny loharanom-baovao, nametraka fitoriana tany amin’ny zandarimaria Toamasina ny orinasa Ambatovy, ny faramparan’ny volana oktobra teo. Olona 10 no nosamborina natao famo­torana, nahatrarana nikela sy kobalta iray kilao avy. Tsy nisy notazonina am-ponja von­jimaika anefa izy ireo taorian’ ny teny amin’ny fampanoa­vana, fa iray ihany no natao fanaraha-maso ara-pitsarana.
Noraisin’ny polisy ny famotorana
Tsy nahafa-po ny orinasa Ambatovy izany ka nametraka ny fanaovana ny fanadiha­diana tany amin’ny polisim-pirenena indray izy ireo. Vo­kany, efa-dahy no voarohirohy amin’ny halatra kobalta mi­lanja 10 kilao, ka mpamily ny iray, mpiambina sivily ny roa ary lehiben’ny fiambenana sivily ny iray fahefatra. Nia­katra fampanoavana, ny 17 novambra teo izy ireo, ka naiditra am-ponja M.D eny Am­balatavoahangy ny roa, fa nahazo fahafahana vonjimaika ny roa hafa.